Pepi Wonder World 2.0.12 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.12 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာ Pepi Wonder World
Pepi Wonder World ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အားလုံးသင်္ဘောများနှင့် Pepi Wonder ကမ္ဘာ့ဖလားသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အဆင်သင့်ရ! သင်နှစ်သက်သောဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ Roleplay သို့မဟုတ်သစ်တွေဖန်တီးပါ။ ကျွန်းကမ္ဘာသို့သွားရောက်များနှင့်နိုက်, မင်းသမီး, နဂါး, GNOME, Pony နှင့်အခြားသောစိတ်ကူးဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ကစား!
တစ်ဦးကတမိသားစုလုံးအတွက် Fairy Tales
ရုပ်အိမ်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ကစားစရာများနှင့်ပျော်စရာနှငျ့ပွညျ့စုံတစ် sandbox 'ဆိုပါစို့။ ဒီ App ကိုအတွင်းပူဇော်သောအတိအကျယျ။ စိတ်ကူးယဉ်ပုံစံရုပ်အိမ်ရှငျဘုရငျ၏ရဲတိုက်နှင့်ထောင်ထဲက, gnomish မိုင်း, နဂါးဂူ, နဲ့ cloud-နမ်းကစားကွင်းနှင့်အတူတစ်ဦးသောတောင်ပေါ်ပါဝင်သည်။ ကလေးများကသူတို့အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များ roleplay သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အဟောင်းလိမ္မာသည် ဖြစ်. Gnome နဲ့မှော်ဥယျာဉ်၏ချစ်တော်မူသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းကပြင်းစွာသောအမင်းသမီးနှင့်သူမ၏သစ္စာစောင့်သိနဂါးတွေအကြောင်းလား ပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကတက်ကြွခြင်းနှင့်ရောင်စုံရောနှောမတူကွဲပြားမှုကိုအားပေးအားမြှောက်နဲ့ဂန်များနှင့်ခေတ်သစ်ပုံပြင်များတစ်မူထူးခြားတဲ့ပေါင်းစပ်ပေးထားပါတယ်။
ဟန်ဆောင် PLAY ၏အရေးပါမှု
Pepi မှာကျနော်တို့တည်းဖြတ် playtime ၏အခြေခံအရေးပါမှုကိုယုံကြည် Play ။ ကျနော်တို့ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကနှင့်လေးတွေများအတွက်ဖျော်ဖြေမှုများနှင့်စေတနာစိတ်နှင့် app များကိုကျွမ်းကျင်စွာနေချိန်မှာကျနော်တို့ကအမြဲကစားမှာသူတို့ကို join ဖို့မိဘများတိုက်တွန်းပါသည်။ ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသင်ခန်းစာသတင်းအချက်အလက်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်လုံးဝသိချင်စိတ်ကမီးပွားချရန်နှင့်တူးဖော်ရေးလာအောင်နှိုးဆွနိုင်ဖို့အတွက်ကလေးတစ်ဦးအဘို့အဆိုရည်မှန်းချက်များ setting ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကစားဂိမ်းများ, လူမှုရေး, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဝေါဟာရချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် Overdrive သို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းထားရန်ကူညီဟန်ဆောင်။ သင့်ကလေးနှင့်အတူကစားသောအခါဤသူအပေါင်းတို့သည်သက်ရောက်မှုကိုခိုင်ခံ့စေလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါဂိမ်းမျိုးစုံကစားသမားတစ်ပြိုင်နက်တူညီ screen ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ခွင့်ပြု, multitouch features တွေထောက်ခံပါတယ်။
စူးစမ်းတိုးချဲ့ရန်နှင့် LIMITLESS PLAY ရှာဖွေတွေ့ရှိ
ကစားနေစဉ်, ကလေးတွေတယောက်ကိုတယောက်ကျွန်းကနေဇာတ်ကောင်တွေနဲ့တ္ထုရွှေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီ feature ကိုအလွန်ဂိမ်း options များချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အားပေး။ သည်အခြားကမ္ဘာသွားရောက်လည်ပတ်စဉ်တချို့ကပစ္စည်းများနှင့်ဇာတ်ကောင်ဖှယျသိချင်စိတ်နှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အရှင်, ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရရှိသို့မဟုတ်ရှုံးသည်။
• 60+ နတ်သမီးပုံပြင်နေထိုင်သူ: နိုက်, မင်းသမီး, GNOME နှင့်နဂါး!
• animations တွေကိုအများကြီးနဲ့အသံ - တူရိယာကိုအသုံးပြုဖို့ယာဉ်မှော်ပစ္စည်းများ, တော်ဝင်အစားအသောက်ချက်ပြုတ်, သတ္တုတွင်းရတနာ, လေးနှင့်လောက်လွှဲ မှနေ. လွှတ် shoot!
•အဝှကျသော့နှင့်ရတနာကိုရှာပါ။ အတူကစားရန် ပို. ပင်ကစားစရာကိုရှာဖွေလျှို့ဝှက်ခန်း Explore!
• Create သို့မဟုတ်ရောထွေးနှင့်အချို့သောအံ့သြစရာရလဒ်အတွက်ပစ္စည်းများကိုက်ညီ!
• Hatch မှော်ကြက်ဥချစ်စရာကလေးမိကျောင်းရဖို့။
•အတူတူ Play - ဂိမ်းမိဘနှင့်ဆိကစားအစည်းအဝေးများများအတွက် multitouch လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်။
Pepi Wonder World အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pepi Wonder World အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Pepi Wonder World အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Pepi Wonder World အား အခ်က္ျပပါ
12stuck စတိုး 1 595
Pepi Wonder World ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ကလေးတွေအဘို့အ Truck ကားဂိမ် အိမ်သူအိမ်သားအဆောက်အဦ
APK အေၾကာင္း Pepi Wonder World အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.0.12
ထုတ်လုပ်သူ Pepi Play
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.pepiplay.com/privacy_policy/
App Name: Pepi Wonder World
Release date: 2019-07-19 20:46:45
လက်မှတ် SHA1: DA:70:69:7D:5C:89:6F:40:C5:39:1C:45:17:6A:4D:B4:1D:8B:38:22
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Pepi Play
အဖွဲ့အစည်း (O): Pepi Play
နယ်မြေ (L): Vilnius
နိုင်ငံ (C): LT
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): LT
Pepi Wonder World APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ